I-Sendgine: Lungiselela oololiwe bakho bokucinga | Martech Zone
NgoLwesithathu, nge-23 kaJanuwari 2013 NgoLwesithathu, nge-23 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Ukuba ubanjwe ziintaba ze-imeyile njengam, kunokubakho ithemba. Sendgine Idibanisa ukusebenziseka ngokulula esikulindeleyo kwi-imeyile kunye nobuchule bombutho obusasazwa ziinkqubo zolawulo lweprojekthi, ukubonelela abasebenzisi ngeqonga elisekwe kwiwebhu elinayo yonke into abayifunayo ukuguqula intsebenziswano ibe yimpumelelo.
Endaweni yokulawula iiprojekthi, u-Sendgine wazisa Oololiwe beengcinga, apho iifayile, imiyalezo, iminyhadala kunye needokodo zihamba kunye ukuya kwinjongo ethile. Iqonga livumela abasebenzisi ukuba bazise iifayile ezinkulu kwaye zisuka kwezinye ii -apps ezinjengeDropbox kunye neFacebook ngokulula.
Ngaphakathi koQeqesho ngalunye, abasebenzisi banokuzisusa kwincoko, bacime i-imeyile kunye nezaziso eziphathwayo ngesici esisimumu, okanye bajolise kwizaziso zomyalezo kubantu abathile abanento ethe cwaka, bezisa isiphelo sebhokisi engenayo. I-Sendgine ikonga ixesha, indawo yediski enzima kunye nokusetyenziswa kwedatha ngokuvumela abasebenzisi ukuba bajonge iifayile ngonqakrazo olunye kunye nokujonga amaxwebhu ngaphandle kokuzikhuphela.
Iifayile kunye nemiyalezo kwi-Sendgine ingagcinwa kwaye ithunyelwe ngokhuseleko "olukhuselekileyo". Eli nqaku libonelela ngeempawu zobumfihlo ezongezelelweyo ezingafumanekiyo nge-imeyile ngokudibanisa ukuphumla ukubethela kunye nemida kulwazi oluboniswe kwizaziso ze-imeyile.
Sendgine unikezela ngokubhaliselwa simahla kunye nokuhlawulwayo. Ngesicwangciso sasimahla, amalungu aqala ngoololiwe abathathu simahla inyanga nenyanga kwaye afumana oololiwe abongezelelweyo basimahla kumsebenzisi ngamnye omtsha ohamba (ukuya kuthi ga koololiwe abatsha abangama-20 ngenyanga). Izicwangciso zobulungu zivela kwi- $ 8 ngenyanga (isiCwangciso seLite) ukuya kwi- $ 19 ngenyanga (iSicwangciso sePro). Kwisicwangciso sePro, abasebenzisi banokuqala inani elingenamda loololiwe.
tags: ukusebenzisana kwe-imeyilesendgine